အားလုံးဘတ်တဲ့ တီချမ်း: မင်း… ဘာလဲ ဆိုတာ…?
မင်း… ဘာလဲ ဆိုတာ…?
ဂျူဝဲလ် ရဲ့ သီချင်းစာသားတွေ က အမြဲလိုလို ကဗျာဆန်ဆန် လှပနေလေ့ရှိပါတယ်
သူ့ သီချင်းနားထောင်ရတာ ကဗျာ ကောင်း တပုဒ် ကို ဘတ်နေရသလို ခံစားချက်အမြဲပေးတယ်။ သူ့ကဗျာတွေကျတော့ ဖွင့်လှစ်မှုတွေများတဲ့ အတွက် တချို့ က မကြိုက်ကြပြန်ဘူး။ ကိုယ်ကတော့ ရှိတည်မှု နဲ့ ဖြစ်တည်မှု အမှန်တရား ပြကတိ စတာတွေ ကိုနှစ်သက်တဲ့ အတွက် ကြိုက်ပြန်ပါတယ်။ ဆေးက ခါးသလို အမှန်တရားဆိုတာလဲ အမြဲ မလှပနိုင်ဘူးလေနော်။ ခုလဲ သူ့သီချင်းတပုဒ် ကိုနားထောင်နေရင်း စာသားလေးတွေ အရမ်းလှလို့ မျှဝေ ခံစားချင်မိပါတယ်။ ကိုယ့်ဘလောခ် ကိုလာဘတ်တဲ့ သူတွေ ကိုယ်နဲ့ ရင်ခုန်သံချင်း တူတဲ့သူတွေ ကြိုက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်။
သူရဲ့ ကဗျာတွေ နဲ့ မတူတာက သူ့သီချင်းစာသားတွေမှာ သူပေးချင်တဲ့ မက်စေ့ရ်ှတွေနဲ့ အတူ စေတနာ တွေကို တွေ့ရပါတယ် ဒီသီချင်းလေးက သူ့ လောလောလတ်လတ်မှ ထွက်ထားတဲ့ sweet and wild ဆိုတဲ့ အခွေထဲက ပါ။ မယ်လိုဒီအနေနဲ့ ကိုယ်ပထမဆုံးစွဲငြိတဲ့ သီချင်းမဟုတ်ပေမယ့် စာသားအနေနဲ့ အဓိပ္ပါယ် ကို သေချာ နားထောင်မိတဲ့ တပုဒ်ပါ။ ဒီတပုဒ် ကိုကြိုက်သလို ကျေနပ်ခြင်း (satisfied) ဆိုတဲ့ နောက်တပုဒ် ကိုလဲ ကြိုက်မိပါတယ် ကြုံရင် ဘာသာပြန်ပေးပါအုံးမယ်
ဘာသာပြန်တာကောင်းရင် မူလစာသားကောင်းလို့ ဖြစ်ပြီး တခုခုလွဲချော်မှု ရှိရင် ကိုယ်ညံ့လို့ပါ။ သီချင်း ရဲ့ ပထမ အပိုဒ် ကို ဘာသာပြန်နေရင်းနဲ့လဲ သူပြောချင်တာကို အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတာကို ကိုယ်နားလည်ရက်သားနဲ့ (အင်မတန်ကြွယ်ဝတဲ့ မြန်မာ ဘာသာ နဲ့) တိတိပပ ကိုယ်ဘာသာ မပြန်နိုင်သလိုခံစားရပါတယ် ကိုယ်လိုနေသေးတယ်…..
ပျင်းသလိုလို ရှိလာလို့ ပြတင်းမှန်ကို လှည့်ချရင်း
ဘတ်စ်ကား ဂိတ်ရဲ့ ခုံတန်းရှည်ပေါ်မှာ ထိုင်နေတဲ့
လူတိုင်း သူမကို ကြည့်မိအောင်၊ သတိထားမိစေနိုင်တဲ့
သူမ ကသာ ဒီလို ထင်ပေါ်အောင်
ကမ္ဘာလောကကနေ သူမ ပျောက်ကွယ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့
သူမ ကို ကြင်ကြင်နာနာ နွေးနွေးထွေးထွေး ဆုပ်ကိုင်ပြီးတော့
သူမ လိုချင်တဲ့ အရာတွေ က သူမဆီမှာ
ကြယ်က ကြယ်ဖြစ်ကြောင်း ပြဖို့ အတွက်
ငှက်ကလေးကလဲ ဘယ်လို ပျံရမလဲဆိုတာ
ပန်းပွင့်လေး ကို ဘယ်လိုပွင့်ရမလဲဆိုတာ ပြောပြစရာမလိုသလို
အလင်း ကိုလဲ အခန်းတခုလုံး လင်းချင်းနေအောင်
မင်းက ဘာပဲ ဖြစ်နေဖြစ်နေ လှနေပြီးသားပါ
တနေ့က မြို့ထဲက စစ်မှုထမ်းဟောင်းအဖွဲ့ကနေ
အဖေ က မျှော်လင့်ချက်သိပ်မရှိတော့တဲ့ သူ့သား ကိုပြောနေတာပေါ့
သားက သွားဖို့ ငယ်ပါသေးတယ်
ဖေဖေ မခံစားနိုင်ဘူး သားရယ်”
လူငယ်လေးက သူ့အဖေ ကို ဒီလို ပြန်ပြောပါတယ်။ ။
“မငိုပါနဲ့ ဖေဖေရယ် ၊
ဖေဖေ ကို “ဘာ့ကြောင့်လဲ…?” လို့မေးတော့
မင်းကို သူက ဆွဲမချနေပါဘူးတဲ့
ကျောက်တုံးကလည်းပဲ ဘာမှမတတ်နိုင်တဲ့ အတွက်
သူနေ့ရာမှာဘဲ သူ မတ်မတ်ရပ်နေရတာပေါ့
မင်းမမြင်ရပေမယ့်လဲ လေကတော့ တိုက်နေမြဲပါ
နေရာတကာ မှာ အမြဲ ငါရှိနေသလိုပေါ့
မင်းက ဘာပဲ ဖြစ်နေဖြစ်နေ ကြံ့ခိုင်နေပြီးသားပါ
မှန်ထဲကို ကြည့်လိုက်ရင် ပြောပြစရာ
နောက်ထပ် ဇာတ်လမ်း တပုဒ်ရှိပါသေးတယ်
သူများတွေ ကို အချစ်တွေ ပေးနေသလောက်
ငါ့ကို ငါပြောရမှာ တခုက
အစေ့တိုင်းမှာ ပြည့်စုံတဲ့ အပင် တပင် ပေါက်နိုင်စွမ်း ရှိပါတယ်
ငါဖြစ်ချင်တဲ့ အရာမှန်သမျှ က ငါ့မှာ ဖြစ်နေပြီးသားပါ
ပန်းလေးတပွင့် က ပန်းလေးတပွင့်ပါပဲ
ပန်းဖြစ်ကြောင်း ပွင့်ပြနေစရာ မလိုပါဘူး
အလင်းကလဲ အလင်းပဲ ဖြစ်တဲ့ အတွက်
အခန်း ကို ဘယ်လို ဖြည့်ပြီး လင်းချင်းပစ်ရမလဲ သိပါတယ်
အမှောင်က လဲ အမှောင်မို့လို့ သာ
ကြယ်တွေ အတွက် လင်းစရာနေရာ ပေးနိုင်တာပေါ့
လှိုင်းတွေ က ပင်လယ်ထဲ ပြန်ပြေးထွက်သွားကြတာ
ကမ်းခြေ ကိုနောက်တခါ ထပ်လာနိုင်အောင်ပါ
နှုတ်ဆက် ခွဲခွာခြင်း က ကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်သခြင်း ကို
ပိုမို ချိုမြ လှပစေပါတယ်
အဲ့တာကြောင့် ငါတို့တွေ ကို သင်ကြားပေးနိုင်တာပေါ့
ငါတို့ဟာ ငါတို့ အဖြစ်နဲ့ပဲ
တော်သင့် နေပြီးသားဆိုတာ တွေကိုပေါ့
Jan 31 st 2011
I SEE A GIRL ON A BUS STOP BENCH
CAUSE IF SHE DON’T STAND OUT
SHE THINKS SHE’LL DISAPPEAR
I WISH I COULD HOLD HER, TELL HER, SHOW HER
AND WHAT YOU ARE - IS BEAUTIFUL
TOOK PLACE AT THE LOCAL V.A.*
THIS WAS HIS CONVERSATION:
YOU CAN’T GO FIRST, I CAN'T HANDLE IT
THE BOY SAID DAD, NOW DON’T YOU CRY
REMEMBER WHEN I WAS A CHILD WHAT YOU USED TO TELL ME
WHEN I’D ASK WHY, YOU’D SAY...
A STONE IS STONE
IT CAN’T HELP BUT HOLD IT’S GROUND
THE WIND JUST BLOWS THOUGH YOU CANNOT SEE
IT’S EVERYWHERE JUST LIKE I WILL ALWAYS BE
AND WHAT YOU ARE - IS STRONG ENOUGH
I HAVE TO TELL MYSELF
IN EVERY SEED THERE’S A PERFECT PLAN
WHAT I HOPE TO BE I ALREADY AM
IT JUST KNOWS HOW TO FILL A ROOM
GOODBYE MAKES HELLO SO SWEET
AND LOVE IS LOVE SO THAT IT CAN TEACH US
THAT WE ALREADY ARE WHAT WE ARE
AND WHAT WE ARE - IS BEAUTIFUL
AND BRIGHT ENOUGH...
Posted by တီချမ်း at 4:09 PM
Anonymous February 20, 2011 at 11:54 PM
နေ့တိုင်းလာချောင်းတယ် ဖေဖော်ဝါရီ ၉ ဆိုတာတွေ့ရင်ဝိတ်မျက်သွားတယ်
နာနေတဲ့ ငါ့ (တို့) ကမ္ဘာ
တီချမ်း ရဲ့ နယူးရီးယား စိတ်ကူးပေါက်ခြင်း
တောင်းဆိုမှုများ နဲ့ ဝက်သားမှို
တီချမ်း ၂၀၁၁ နယူရီးယား ရီစလူးရှင်း အပ်ဒိတ်
new year resolution....what the F...?
မချက်တာကြာတဲ့ တီချမ်းနဲ့ အမဲသား ချဉ်ပေါင်ကြော်/ဟင်...